एक्सक्लुसिभ : आइक्यानका उपाध्यक्ष प्रकाशजंग थापा 'पीआर होल्डर' भएको खुलासा !
ARCHIVE, INVESTIGATION » एक्सक्लुसिभ : आइक्यानका उपाध्यक्ष प्रकाशजंग थापा 'पीआर होल्डर' भएको खुलासा !
काठमाडौँ - हाल नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)का उपाध्यक्ष रहेका प्रकाश जंग थापासँग अष्ट्रेलियाको पीआर रहेको खुलासा भएको छ । अष्ट्रेलियामा समेत उनको फर्म रहेको तथ्य बाहिर आएपछि उनीसँग अष्ट्रेलियाको पीआर रहेको खुलेको हो । लामो समय अस्ट्रेलिया बसेर २०१३ मा नेपाल फर्केका उनको अस्ट्रेलियामा पनि सिए फर्म रहेको प्रमाण फेला परेको छ । अस्ट्रेलियामा निजी फर्म दर्ता गर्न त्यहाँको स्थायी वासिन्दा (पिआर) स्वीकृति पाएको हुनुपर्छ।
पिआर लिएपछि अस्ट्रेलियामा दर्ता भएको थापाको सिए फर्मको विवरण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्
लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा उनले डिभी र पीआर धारीहरुलाई निजामति कर्मचारी हुन नपाउने नियमलाई पास गराएका थिए । उक्त नियमको अक्षरस पालना गर्ने हो भने थापा नेपालको सरकारी, अर्ध-सरकारी वा नियामक निकायमा बस्न पाइँदैन । यसअघि अर्थ सरोकार डटकमसँग कुराकानी गर्दै लालबाबु पण्डितले पीआर धारी आईक्यानको अध्यक्ष हुन नपाउने स्पष्ट पारेका थिए । 'नेपाल सरकारको एक रुपैयाँमात्र लगानी भएको ठाउँमा पनि पीआरधारी बस्न पाउँदैन। ' अर्थ सरोकार डटकमसँग कुराकानी गर्दै उनले भनेका थिए ।
यता सामान्य प्रसासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले मन्त्रालयलाई जानकारी भएसम्म नियम विपरित पीआर बोकेर नेपाल सरकार अन्तर्गतका विभिन्न निकायमा काम गर्नेहरुलाई कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाईने बताएका छन् । उनले विद्यमान नियमअनुसार पीआर बोकेका कुनैपनि राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरु पाईएको खण्डमा तीनलाई तुरुन्त कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाईने बताएका छन् । उनले पीआर बोकेर कुनैपनि सरकारी निकायमा काम गरेको पाईए तुरुन्त कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन सकिने बताएका छन् । 'हामीले जानकारी पाएसम्म अनुसन्धान गर्छौं । अनुसन्धानपछी कसैको पीआर भएको कुरा प्रमाणित भयो भने उसलाई कानुनत: कार्वाहि हुन्छ, त्यसमा कुनै शंका छैन ।' अर्थ सरोकार डटकमसँग कुराकानी गर्दै उनले भने ।
के भन्छन् आइक्यानका उपाध्यक्ष प्रकाशजंग थापा ?
अर्थ सरोकारकर्मी सुरज प्याकुरेलसँग कुराकानी गर्दै आइक्यानका उपाध्यक्ष प्रकाश जंग थापाले आफुसँग पीआर नभएको दावी गरेका छन् । आफु यसअघि अष्ट्रेलियामा बसेको स्वीकार्दै उनले सन् २०१२ मानै आफु नेपाल आएर काम गरेकाले आफुसँग अष्ट्रेलियाको पीआर नभएको उनको दावी छ । 'तपाईंसँग अहिलेचाहिं पीआर छ कि छैन ।' भन्ने हाम्रो सीधा प्रश्नमा उनलेपनि सीधानै उत्तर दिए, 'छैन'। 'तपाईंसँग पीआर भएको भन्दै छानविनको मागसहित विभिन्न निकायमा उजुरी परेको छ नि ?' भन्ने हाम्रो अर्को प्रश्नमा उनी भन्छन्, 'आवश्यक परेपछि त्यसकोपनि जवाफ दिउंला । तर अहिले म नेपालमा छु र नेपालमै काम गरिरहेको छु ।'